हिजो कस्तो थिए आज यस्तो बिजोग अ’वस्था, ६ बर्षिय बाबु , आखिर के भयो यस्तो ? – Taja Khawar
हिजो कस्तो थिए आज यस्तो बिजोग अ’वस्था, ६ बर्षिय बाबु , आखिर के भयो यस्तो ?
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भाद्र ११, २०७८ समय: १५:३३:४७
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भाद्र ११, २०७८ समय: १२:१४:५७
धरानमा ६ बर्षिय बाबु जो एक बर्ष अघिसम्म मजाले नाच्ने ,कुद्ने ,खेल्ने र उतिकै मोटो पनि थिए । तर अहिले एक बर्ष पछि उनी यो ढंगले सु`केका छन् कि जो कोहिले हेर्दा मन रुनु स्वभाविक नै हो ।
उनी एकोहोरो रोइ रहन्छन् ।उनको खुट्टा हात दुबै बा`ङ्गा भैसकेका छन् ,उनको शरीर पुरै नै सु`केको छ ।
त्यो परिवारमा ब`ज्रपात कहाँ त्यति मात्रै होर हजुरबुवाको पनि दुइटै मृगौला फेल छन् र लाग्छ दुख जति भगवानले यहि परिवारलाइ मात्रै थुपारिदिएको छ ।
चिकित्सकले ती बाबुलाई लागेको रो`ग दिमागि भएको कारण शो रोगको उपचार नै नहुने बताइसकेपछि अहिले परिवार पुरै त`हसनहस भएको छ ।
काठमाडौं देखि सिलगुढिसम्म पनि उपचारको आशले लगियो तर काहिबाट पनि हितमा सकारात्मक समाचार नपाएपछि अन्ततः यी बाबुलाई घरमै राखेर टुलुटुलु हेर्न बिबस छ परिवार। आर्थिक अवस्था पनि एकदमै कमजोर भएको शो परिवार अहिले आर्थिक र मानसिक च`पेटा दुबैबाट गुज्रिन बिबस छ ।
श्रीमतीलाई रं गेहात प क्राउ गर्न श्रीमान ६ घण्टा खाटमुनी लुकेका थिए, जब यस्तो दृष्य देखे भयो नसोचेको घटना
By Nepalnews -March 27, 20210297
Last Updated on: August 27th, 2021 at 3:33 pm